Izinsimbi ze-alamu ekwakhiweni kwezokuxhumana - Ukuqeqeshwa kwengqondo
Izinsimbi ze-alamu ekuthuthukiseni ukuxhumana
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » ulimi » Izinsimbi ze-alamu ekuthuthukiseni ukuxhumana
Yiziphi izimo lapho kufaneleke kakhulu ukuxhumana nochwepheshe? Nazi ezinye izinkomba ezihlukaniswe ngeqembu leminyaka:
Izinyanga ze-6 Akahleki noma amemeze; ayibheki ohlangothini lwemisindo emisha
Izinyanga ze-9 Cha noma ukubhuza okulinganiselwe; ayikhombisi injabulo noma intukuthelo
Izinyanga ze-12 Akukhombisi izinto; akenzi ukushukuma komzimba njengokukhanda ikhanda
Izinyanga ze-15 Akakalisho igama lokuqala okwamanje; ayiphenduli "cha" noma "sawubona"
Izinyanga ze-18 Akasebenzisi okungenani amagama ayi-6-10 ngokungaguquguquki; ayizwa noma ibandlulula imisindo kahle
Izinyanga ze-20 Akanayo iqoqo kongwaqa okungenani abayisithupha; ayenzi iziyalezo ezilula
Izinyanga ze-24 Unamagama angaphansi kwamagama angama-50; ayinandaba nokuxhumana nomphakathi
Izinyanga ze-36 Abafokazi bayasokola ukuqonda lokho akushoyo; akasebenzisi imisho elula
Ezinye izimo okufanele uziqaphele:
ukukhetha ukudla (yidla kuphela ukudla okungu-4-5)
akukho ntshisekelo yokuxhumana
ukulahlekelwa ngamathe ngokweqile
Ngingingiza izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha.
Kuhunyushwe futhi kwaguqulwa ngu: ULanza noFlahive (2009), Umhlahlandlela weLinguiSystems to Milestones Yezokuxhumana
Kwethu Ulimi lweGameCenter uzothola inqwaba yemisebenzi yolimi yamahhala yokuxhumana online
Kwiphepha lethu le- ikhasi lethebhu uzothola izinkulungwane zamakhadi wamahhala ahlobene nolimi nokufunda
izinsimbi zama-alamu, ulimi, izinkinga zokuxhumana, izinkinga zokukhuluma, ukuthuthukiswa kwe-atypical
Izinsimbi ze-alamu ekuthuthukiseni ukuxhumana2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/red-35853_1280.png200px200px
Isiphazamiso semantic kubantu abadala: ithiyori nokuzivocavoca kwamahhalaI-Aphasia, uLimi
Ukuthuthukiswa kwemiqondo ezinganeniulimi